Fampianarana Ambony hoan’ny Mpitsoa-ponenana Atsangan’ny Oniversite Antserasera Alemàna Iray · Global Voices teny Malagasy
Fampianarana Ambony hoan'ny Mpitsoa-ponenana Atsangan'ny Oniversite Antserasera Alemàna Iray
Nandika (en) i Jill Baehring
Voadika ny 12 Jona 2015 3:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, čeština , Ελληνικά, Română , Español, русский, 日本語, عربي, Deutsch
“Izay manokatra varavaran-tsekoly, [dia] manakatona fonja.” Fanevan'ny Wings University.
Naorin'ilay mpianatry ny oniversite monina ao Berlin, Markus Kreßler tamin'ny volana Desambra 2014 ny sekoly antserasera tsy mitady tombombarotra Wings University izay miantso ireo mpitsoa-ponenana maniry hanohy na hanomboka fianarana ambony. Araka ny filazan'ny habaky ny fikambanana, toy izao avy no atolony:
Fampianarana ambony sokajy voalohany. Diplaoma ankatoavina iraisam-pirenena. Natao ho an'ny rehetra na aiza na aiza misy azy. Tsy mijery ny maha-lahy sy vavy, zom-pirenena, foko, fivavahana, taona, vola na fari-piainana. Fampianarana sahaza ny filàna sy ny fitakian'ny mpitsoa-ponenana manerantany.
Afaka misoratra anarana tsy mila fanamarinana ny mombamomba azy na diplaoma ananana ny mpianatra, ary maimaimpoana tanteraka ny saram-pianarana. Ny fotoana tokana tsy maintsy anaovana fanamarina ny mombamomba azy kosa dia rehefa amin'ny fetin'ny fizarana diplaoma, mba hahazoana diplaoma ara-dalàna. Mandra-pahazoan'ny Wings University ny sata ofisialy amin'ny maha-oniversite azy, dia ireo oniversite mpiara-miasa aloha no manome ny diplaoma.
Amin'ny teny anglisy avokoa ny fampianarana rehetra ka misokatra hoan'ny mpianatra miteny anglisy manerantany. Noho ny fiarahamiasa amin'ny oniversite sasany, anisan'izany ireo sekoly ambony malaza, ireo mpampianatra mpiara-miasa no mandamina ny fampianarana.<
Manomboka amin'ny mihintsan-dravina [ilabolantany avaratra] hoavy, dia hanolotra fampianarana momba ny injeniôrà, toe-karena sy ny informatika ny Wings University. Nifototra amin'ny fakan-kevitr'olona 617 izany safidy izany, izay nilaza fa mpitsoa-ponenana ny ​​80 isan-jaton'izy ireo. Nanontaniana azy ireo ny diplaoma ambony indrindra azony, ny fianarana natao ary ny fandaharam-pianarana tian'izy ireo arahina.
Na dia eo aza ny fisokafany manerantany, miorim-paka ao Alemaina ny fikambanan'i Kreßler, izay iasan'ny sekoly mba hanova ny zavamisy satria matetika mitolona amin'ny fandaharam-pianaran'olon-dehibe ny mpitsoa-ponenana :
Mandehana eny an-dalana, miresaha amin'ny olona monina any anaty tobim-pialofana, miresaha momba ny tanjon'izy ireo, ny fianarana noratoviny farany sy ny vinavinan'izy ireo. Ho gaga ianao mahita hoe firy amin'izy ireo no nanomboka nianatra injeniôra no saika nahavita ny fianarany saingy tsy manana fahafahana hanohy hianatra any amin'ny oniversite amin'izao fotoana izao.
Araka ny lalàna federaly mikasika ny fianarana ambony sy ny ankamaroan'ny fitsipiky ny sekoly, mahazo misoratra anarana any amin'ireo oniversite ny mpitsoa-ponenana saingy mila ny fankatoavan'ny birao misahana ny vahiny eo an-toerana, izay mety ho sakana ho an'ny mpianatra mpitsoa-ponenana. Alohan'ny fisoratana anarana, tsy maintsy manaporofo ny fahamarinan'ny fahaizany na diplaoma ananany ny mpianatra, izay mitaky antontan-taratasy matetika tsy ananan'ireo mpitsoa-ponenana.
Noho ny fitsipika mandritra ny fandinihana ny fangatahan'ny mpialokaloka, matetika tsy maintsy miova toera-ponenana imbetsaka ny mpitsoa-ponenana ary alefa any amin'ny toerana lavitra, ka mahatonga azy ireo ho lavitry ny toeran'ny oniversite. Miatrika olana mikasika ny faharetan'ny ny fijanonan'izy ireo ao an-toerana ihany koa ireo mpitsoa-ponenana ao Alemaina, tsy lazaina intsony ny sakana amin'ny tsy fahaizana teny Alemana.
Tsy toy ireo mpitsoa-ponenana nahafeno ny dingana amin'ny fangatahana fialokalofana sy nahazo satam-piarovana, tsy afaka mangataka vatsim-pianarana na fanohanana hafa avy amin'ny fanjakana ireo mpitsoa-ponenana hafa raha tsy nipetraka tao amin'ny firenena nandritra ny efa-taona mahery. Tsy mahagaga raha nampiseho ny fakan-kevitra nataon'ny Wings University fa mihoatra ny antsasaky ny olona nohadihadiana no tsy afaka manohy fianarana noho ny tsy fahampian'ny loharanom-bola.
Ny hany zavatra ilain'ireo mpianatra ao amin'ny Oniversite Wings dia fidirana amin'ny aterineto, solosaina, fotoana sy toerana hianarana. Andrasana raha hahomby ny sekoly tahaka izao hoan'ny mpianatra miasa lavitry ny toerana nandosirana.
Na hahomby na tsia ity fanandramana vaovao io, ny maodely fampianarana hafa ao amin'ireo firenena idiran'ny mpifindramonina dia tsy mahasolo ny rafi-pampianaran'ny mpitsoa-ponenana any an-tanindrazany , na ny fomba fiasa tsara kokoa hiantohana ny fahazoana diplaoma sy fidirana ao anatin'ny tambajotran'ny oniversite iraisampirenena.
02 Mey 2021Iràna
18 Avrily 2021Amerika Avaratra